Cancer – စာမကျြနှာ7– Healthy Life Journal
ကင်ဆာကာကွယ်ရေးအတွက် နေ့စဉ် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အလွယ်နည်းလမ်းများ
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ဟောလိဝုဒ်အနုပညာရှင်တွေရဲ့ အတိုင်ပင်ခံဆရာဝန် Dr.OZ က လူတိုင်းလူတိုင်း ကင်ဆာအန္တရာယ်ကင်းဝေးဖို့ လွယ်ကူရိုးစင်းတဲ့ ဘ၀နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံကို အခုလို မျှဝေထားပါတယ်။ (၁) အက်စပရင်၏ ကောင်းကျိုးကို ရယူပါ တစ်နေ့မှာ အက်စ်ပရင် တစ်ခြမ်း (လူကြီးသုံး...
ကမ္ဘာ့ကျော်ကြားသည့် ကင်ဆာအထူးကု ဆရာဝန်တို့ပြောကြားသည့် ကင်ဆာရှောင်လွှဲနိုင်မည့် နည်းလမ်းများ
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ ကင်ဆာကျွမ်းကျင်သူတွေက ကင်ဆာကာကွယ်နိုင်ဖို့ ရိုးစင်းတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာ သင့်ကြောင်း ပြောကြားထားပါတယ်။ ကယ်လီဖိုးနီးယား ကင်ဆာစင်တာမှ ကျန်းမာရေး ဒါရိုက်တာ ဟိုမေရွန်းဆာနာတီ၏ အကြံပြုချက် – သကြားနဲ့ အဆင်သင့်အစာ အလွန်အမင်း...
ဆေးလိပ်သောက်သဖြင့် လည်ပင်းဖောက်လိုက်ရသည့် ၅၁ နှစ်အရွယ်အမျိုးသား
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ မစ်ကီဘရက်ဒီက လည်ပင်းကကင်ဆာအကျိတ်ကို ဖယ်ရှားပြီးနောက် သူရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို အွန်လိုင်းမှာ ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ အသက် ၅၁ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားဟာ ၁၄ နှစ်သားကတည်းက ဆေးလိပ်သောက်ခဲ့ပြီး အာသီးကင်ဆာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်ဘက်အာသီးနဲ့ လည်ပင်းမှ အကျိတ်ကို ဖယ်ရှားခဲ့ရပြီး နားကနေ...
မေး. ရင်သားကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့အချိန်နဲ့ ဆေးသွင်းနေရတဲ့အချိန် ဘာအစားအသောက်တွေ ရှောင်ရမလဲဆရာ၊ ဘာတွေကို စားသင့်ပါသလဲဆရာ။ ဒေါ်တင်တင်ကြီး၊ ရန်ကုန်။ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင်(အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. ရင်သားကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့အချိန်နဲ့ ကင်ဆာဆေးသွင်းနေရတဲ့အချိန်တွေမှာ စားသောက်သင့်တာက သာမန်ကျန်းမာလိုသူတွေလိုပဲ စားသောက်သင့်တာဖြစ်ပါတယ်။ (၁) ရေများများ သောက်ရပါမယ်။ (၂) အရည်ရွှမ်းတဲ့...
၁၀ မိနစ်စမ်းသပ်ရုံဖြင့် ကင်ဆာရှိ၊မရှိသိနိုင်မည့် စစ်ဆေးနည်းအသစ်ကို သိပ္ပံပညာရှင်များတီထွင်
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ (Ref;MN) တံထွေးတစ်စက်ကို အိမ်မှာစစ်ဆေးရုံဖြင့် ကင်ဆာ ရှိ၊ မရှိသိနိုင်မည့် နည်းလမ်းအသစ်ကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေက တီထွင်နေကြပါတယ်။ ကယ်လီဖိုးနီးယား စတိတ်တက္ကသိုလ်မှ ကင်ဆာရောဂါဆိုင်ရာပါမောက္ခဒေးဗစ်ဝမ်က အရည်စစ်ဆေးမှုကနေတစ်ဆင့် အရည်ထဲမှာ လည်ပတ်နေတဲ့ အကျိတ် DNA ကို စမ်းသပ်နိုင်မယ်လို့...
အမျိုးသမီးတိုင်း သိထားသင့်သည့် သားအိမ်ကင်ဆာ လက္ခဏာများ
ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ် အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) သားအိမ်ကင်ဆာဆိုတာ နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာနဲ့ သားအိမ်ကိုယ်ထည်ကင်ဆာဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ တစ်မျိုးနဲ့ တစ်မျိုးမတူပါဘူး။ သားအိမ်ခေါင်းကကျတော့ မွေးလမ်းကြောင်းရဲ့အ၀မှာရှိတာပါ။ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာဖြစ်ရင် သားအိမ်ခေါင်းမှာ အနာဖြစ်တယ်၊ အဖုအကျိတ်တွေ ဖြစ်တယ်၊ ပုံမမှန်သွေးဆင်း တာတွေဖြစ်တတ်တယ်၊ အမျိုးသားနဲ့အတူနေရင် သွေးဆင်းတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။...
ကလေးဆီကို ကင်ဆာရောဂါအန္တရာယ် မကျရောက်အောင် . . .
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကလေးသူငယ်တွေမှာ ဖြစ်တဲ့ ကင်ဆာအများစုဟာ မိဘအလုပ်အကိုင်၊ မိခင်ရဲ့ မျိုးဆက်ပွားရာဇ၀င်၊ မိဘ ဆေးလိပ်သောက်တာ၊ အရက်သောက်တာ၊ သန္ဓေသားဘ၀က မိခင်ရဲ့ အစားအသောက်နဲ့ ကလေးရဲ့ နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံတွေနဲ့ ဆက်နွှယ်မှုရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိဘတွေအနေနဲ့ ကလေးတွေကို...
ပါမောက္ခဒေါ်ရင်ရင်ထွန်း (ဥက္ကဌ၊ ရွှေရောင်နှင်းဆီ ကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်း) မေး။ ။ ရင်သားကင်ဆာအကြောင်း သိပါရစေဆရာမ။ ဖြေ။ ။ ရင်သားအတွင်းက ဆဲလ်တွေပုံသဏ္ဌာန်ပြောင်းလဲရာမှ ရင်သားကင်ဆာစတင် ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့ ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှာထုတ်ပြန်တဲ့ သတင်းမှတ်တမ်းတွေအရ ၂၀၁၂ခုနှစ်က အမျိုးသမီးတွေမှာ ရင်သားကင်ဆာရောဂါဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာ...
ဇှနျ လ၊ 2019 ခုနှဈ